सम्राटको ‘इस’ बोलको गीतको बलिउडको चर्चित म्युजिक कम्पनीले हिन्दी भर्सनमा निकाल्दै - टि. एल. एन पोस्ट
Home म्युजिक भिडियो सम्राटको ‘इस’ बोलको गीतको बलिउडको चर्चित म्युजिक कम्पनीले हिन्दी भर्सनमा निकाल्दै
सम्राटको ‘इस’ बोलको गीतको बलिउडको चर्चित म्युजिक कम्पनीले हिन्दी भर्सनमा निकाल्दै
केहि दिन अगाडी मात्र रिलिज भएको ‘इस’ बोलको गीत बलिउडको चर्चित म्युजिक कम्पनीले हिन्दी भर्सनमा निकाल्ने भएको छ । यस गीतका गायक, संगीतकार तथा गीतकार रहेका सम्राट चौलागाईले इन्डियाको चर्चित म्युजिक कम्पनीले आफ्नो गीत हिन्दी भर्सनमा निकाल्ने कुरा बताएका हन् । सो म्युजिक कम्पनीको नाम केहि दिनमा सार्वजनिक गर्नेपनि सम्राटले बताए ।
हिन्दी भर्सनमा बन्न लागेको गीतमा सम्राटकै स्वर रहने छ । तर फिमेल स्वरमा भने बलिउडकै चर्चित गायिकाले गाउने कुरा सम्राटले बताए । त्यस्तै यस गीतको कलाकारहरुमा नेपालको चर्चित अभिनेता रहनेछन्, भने केटि मोडलमा बलिउडकै चर्चित अभिनेत्री रहनेछन् । हिन्दी भर्सनमा बन्न लागेको गीतको टिम नेपाल प्राय सबै बलिउडबाटै हुनेछ । बलिउडबाट हुने गायिका, अभिनेत्री र म्युजिक कम्पनीको नाम केही दिनपछि सार्वजनिक गर्ने सम्राटले बताए ।
यस विषयमा कुरा गर्दैै सम्राटले भने बलिउडको चर्चित कम्पनीले हाम्रो नेपाली गीत हिन्दी भर्सनमा निकाल्ने प्रस्तावले धेरै खुशि लागेको छ । हाम्रो सहकार्यले नेपाली म्युजिक क्षेत्रलाई बलिउडसंग जोड्ने काम हाम्रो टिमले गरेकोमा अझ धेरै खुशि छु ।
४ दिन अगाडी मात्रै यस गीतको म्युजिक भिडियो रिलिज भएको थियो । दर्शकहरुले गीत रुचाएका कारण पनि बलिउडको म्युजिक कम्पनीले हिन्दी निकाल्न लागेको हो । ‘इस’ बोलको गीत युट्युव र टिकटमा हिट चर्चा कमाइरहेको छ ।
Previous articleसौगात मल्ललाई ‘सुपरस्टार’को ट्याग
Next articleकरिश्मालाई महानायिकाकाे उपाधि
पल र समीक्षाको भिडियो रिलिज (भिडियो सहित )
रचना र प्रतापको ‘मैले माया लाउने कुन खालको’ सार्वजनिक (भिडियो सहित )
कांग्रेस र माओवादीको वडाध्यक्षमा बराबर मत आएपछि गोलाप्रथाबाट छिनोफानो
रेखा थापा विवाह बन्धनमा बाँधिदै
प्रेमध्वजलाई संझदै अस्पतालबाट मदनकृष्णले लेखे–‘मैले आँशु थाम्न सकिनँ दाई’